राम्रो फोटो सत्रका लागि प्रारम्भिक चरणहरू क्रिएटिव अनलाइन
बेट्रीज हर्नानी | | फोटोग्राफी, सामान्य
आजकल म त्यो सामाजिक नेटवर्कहरू र सबै भन्दा माथि विचार गर्दछु इन्स्टाग्रामले हामीलाई पूर्ण दृश्य समाजमा सिर्जना वा रूपान्तरण गर्दैछ। तपाई प्रति दिन कति पटक इन्स्टाग्राम ब्राउज गर्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ कि यदि मैले प्रत्येक दिन यो सामाजिक नेटवर्क खोल्ने पटकहरू गणना गर्ने हो भने हामी औसत 30० पटकको बारेमा कुरा गर्ने छौं। तपाईं "कति बढि बढाइएको" सोच्न सक्नुहुन्छ! सम्भवतः अझ बढी।
यो हामीलाई एक मा ल्याउँछ छवि oversatrationहामी पहिले नै आफूलाई राम्रो फोटोग्राफरहरू भनेर विश्वास गर्दछौं, तर म दु: खी छु, यो त्यस्तो छैन। तपाईं राम्रो फोटो लिन सक्नुहुनेछ, वा धेरै, तर त्यसले तपाईंलाई एक राम्रो फोटोग्राफर बनाउँदैन।
र म यो किन भन्छु? किनभने राम्रो फोटो पछाडि त्यहाँ धेरै काम हुन्छ, र एक दिन होइन, एक व्यक्ति होइन, त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जो यस प्रोजेक्टको एक हिस्सा हुन्।
म भन्दछु के हो राम्रो फोटो सत्रको लागि प्रारम्भिक चरणहरू।
शीर्षकको बारेमा सोच्नुहोस्.
सन्दर्भहरूको एक फोल्डर सिर्जना गर्नुहोस्। मेरो लागि यो जस्तो हो जब म डिजाईन गर्छु, मैले सन्दर्भहरू, शैलीहरू, दृष्टिकोणहरू, प्रकाश, आदि बनाउनु पर्छ।
सबै सोच्नुहोस् तत्वहरू जुन मलाई सत्रको लागि आवश्यक पर्दछ।
उठाउनुहोस् तत्वहरूको स्थिति।
प्रकाश। यो परिणाम अन्तिम परिणामका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने राम्रो प्रकाश बिना अघिल्लो सबै काम बेकार छ।
जब हामीसँग अध्ययन सुरु हुन्छ सबै तत्वहरूको साथ हामीले सुरु गर्नुपर्दछ शुट, तर १ वा २ वा not होइन, तर धेरै फोटोग्राफहरू, किनकि पक्कै पनि of० को बाहिर, हामी २ वा like मनपर्नेछौं।
एक पटक हामीले फोटोग्राफहरू चयन गर्यौं जुन हामीलाई सबैभन्दा मनपर्दछ हामीले त्यसलाई सम्पादन गर्नु पर्छ। आदर्श रूपमा, तिनीहरूलाई सकेसम्म थोरै सम्पादन गर्नुहोस्।
र अन्तमा, यी सबै चरणहरू पछि हामी भन्न सक्छौं कि हामीसँग इच्छित फोटो छ। निराश नहुनुहोस्! म यसो भन्दिन कि तपाईं एक खराब फोटोग्राफर हुनुहुन्छ, तर यदि तपाईंले यी चरणहरू अनुसरण गर्नुभयो भने तपाईं अझ राम्रो हुनुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » राम्रो फोटो सत्रको लागि प्रारम्भिक चरणहरू
नयाँ आईफोन ११ र आईफोन ११ प्रो